China Treme-HA® Hyaluronic asidra avy amin'ny vokatra voajanahary Fanamboarana sy orinasa |Focusfreda
Treme-HA® Hyaluronic acid avy amin'ny vokatra voajanahary voajanahary
Treme-HA® dia karazana zavamaniry vaovao azo avy amin'ny humectant mahomby indrindra nalaina
Tremella, manana antioxidation tsara sy fananana moisturizing.Karazana rano izy io
polymer mety levona, ny salan'isa molekiola lanja dia mihoatra ny iray tapitrisa Da, ary ny molekiola rafitra hazondamosiko dia Mannan voaforon'ny alpha (1-3)-glycosidic fatorana, ary ny rojo branched amin'ny glucuronic asidra.xylose sy fucose sns., Ny ampahany mavitrika dia ampahany ara-drafitra mahazatra amin'ny alpha (1-3) -mannan
Mahomby ny moisturizing
Mahasalamany anti-be taona
Fotsy na saika fotsy vovoka na granule
Tombontsoa amin'ny vokatra
Tena mandaitra ny moisturizing: Afaka manatsara ny fahaizan'ny hydration amin'ny selan'ny hoditra izy io ary mampitombo ny votoatin'ny rano ao amin'ny stratum corneum amin'ny hoditra;
Antioxidant fahanterana: manana fahafahana scavenge radika maimaim-poana, mampitombo ny hozatra sela velona, ​​manemotra ny fahanterana hoditra, fanamboarana ny hoditra;
Manatsara ny fahatsapana hoditra: Treme-HA dia manana toetra tsara ho an'ny hoditra ary avo lenta.Aorian'ny fampiasana, ny hoditra
moisturizes ary tsy mahatsiaro ho tery sy malama.
Misy fofona kely na tsy misy fofona
Amaranth na paiso
Fanamarinana ny asidra glucuronic
Fanamarinana ny saccharide total
pH (0,5% aq. sol., 25 ℃)
Transmittance (0,1% aq. sol., 25 ℃)
Viscosity dinamika (0.5%aq.sol., 25 ℃, 2 / 6rpm)
Ny vokatra dia tokony ho voaisy tombo-kase ary tehirizina ao amin'ny toerana mangatsiatsiaka sy maizina.
24 volana(fonosana tsy nosokafana)
Treme-HA® dia afaka mampitombo be ny hydratability ny hoditra sela, mampitombo ny hamandoana afa-po ny hoditra;dia afaka mamorona sosona ny moisturizing fiarovana sarimihetsika mba hampihenana ny hamandoana very eo amin'ny hoditry ny hoditra, miaraka amin'ny roa vokatry ny rano fitehirizana sy ny rano mihazona.
Antioxidation sy anti-aging
Miaraka amin'ny fahaiza-manaon'ny superoxide radical sy hydroxyl radical, dia afaka misoroka ny fahanterana ny hoditra amin'ny alàlan'ny fanakanana ny peroxidation ny cytolipin, ary mampiroborobo ny fanavaozana ny hoditra amin'ny fampitomboana ny fahaveloman'ny sela hoditra.So Treme-HA®dia afaka manampy ny olombelona hanemotra ny fahanteran'ny hoditra sy hanamboatra ny hoditra simba.
Manatsara ny fahatsapana hoditra
Treme-HA® dia karazana polymère molecular avo lenta, miaraka amin'ny firaisan'ny hoditra tsara sy ny viscosity avo.Miharihary ny effet lubricating rehefa avy mampiasa ny vokatra fikarakarana hoditra miaraka amin'ny Treme-HA® nampidirina, ary ny hoditra dia malefaka sy malefaka, tsy misy fahatsapana maina sy tighr.
Fampiasana soso-kevitra: 0.01%-0.5%
Fampiasana: Mety levona anaty rano, azo ampidirina mivantana amin'ny dingana aqueous.
Fampiharana: indrindra ho an'ny essence, saron-tava, crème, lotion, toner ary kosmetika hafa.